Guardiola oo si xiiso leh u ammaanay saxiixa cusub kooxda Man City ee Haaland – Gool FM
(Manchester) 12 Maajo 2022. Tababaraha Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ammaanay xiddiga reer Norway Erling Haaland, kaasoo imaan doona garoonka Etihad dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Manchester City ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay kala heshiisay kooxda Borussia Dortmund arrinta ku aadan saxiixa xiddiga reer Norway ee Erling Haaland.
Haddaba Guardiola ayaa kaddib guushii ay xalay kooxdiisa Manchester City ka gaartay naadiga Wolves, waxaa wax laga weydiiyay Haaland, wuxuuna ku jawaabay:
“Hamigiisa kaliya ma noqon doono inuu goolal dhaliyo.”
“Waan hubaa inuu si fiican ugu haboonaan doono kooxdeena, waan ku faraxsanahay shaqadayda dabcan, ciyaartoyda noocan oo kale ah waxay kor u qaadaan tayada tababaraha.”
“Waan hubaa inaan ka caawin doono inuu kooxda u la qabsado sida ugu macquulsan, laakiin shaqadiisa kaliya ma noqon doonto inuu goolal dhaliyo, haa, wuxuu soo dhaliyay gool badan xirfadiisa, waxaana ka caawin doonaa inuu in badan dhaliyo.”
Si kastaba ha noqotee, Man City ayaa ku dhow inay ku guuleysato Premier League, maadaama kooxda ay u baahan tahay kaliya 3 dhibcood, labada kulan u harsan, si ay u xaqiijiso ku guuleysiga horyaalka, maadaama farqiga goolasha City ay ka badan tahay kooxda Liverpool.